ဧပြီလဥရောပခရီးသွားအဆိုပါနွေဦးအချိန်ကာလအတွင်းဥရောပခရီးသွားဆိုလိုတယ်! ဥရောပနိုင်ငံအများစုယခုအချိန်အထိအီကွေတာကနေကတည်းက, အဆိုပါအများစု ကျြောစောသော မြို့ကြီးများဧပြီလတုန်းပဲနည်းနည်းရှိအေးမြသောများမှာ (အညီထုပ်ပိုး). နေဆဲ, ဧပြီလဥရောပခရီးသွားသည့်အလုပ်အများဆုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တစ်နှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးလတစျခုဖွစျနိုငျသနှင့် လူကြိုက်အများဆုံးမြို့ကြီးများ ဒီမှာ. အပူချိန် ပျော်စရာအဘို့အလုံလောက်အောင်ပူနွေးများမှာ အပန်းဖြေ, သေးလူအစုအဝေးအရွယ်အစားသင်သည်မေလနှင့်ဇွန်လများတွင်စတင်မြင်ရပါလိမ့်မည်ထက်အများကြီးသေးငယ်များမှာ. နွေ ဦး ရာသီတွင်သင်၏ဥရောပခရီးစဉ်သို့သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းစာရင်းဖြစ်သည်!
ဒီအရုပ်ပုံအဆိုပါနွေစဉ်အတွင်းဥရောပခရီးသွား၌ဘမ်းမိ, ရုပ်ပုံငြိမ်းချမ်းသော Lakeside ကျေးရွာများနှင့်များ၏တောင်ခြေဆန့်ကျင်သတ်မှတ်ထားနက်ရှိုင်းသောအပြာရေကို အဲလ်ပ်တောင်တန်း, နှင်းအဖြစ်သို့ထိပ်ဟာဝိဇ္ဇာအတတ်အား Borromeo ကျွန်းများမှသိသိသာသာနောက်ခံဖွဲ့စည်းရန်ဘယ်မှာ; Como beguiling, တောင်များနက်နဲရေထဲသို့ထိုးဘယ်မှာများနှင့် ပါ ရွာတောင်စောင်းမှတွယ်ကပ်. မြင်ကွင်းများဤအမြိုးမြိုးကဗျာရေးဖို့သင်သည်လာအောင်နှိုးဆွသို့မဟုတ်ကောက်ကာငင်ကာတစ်ဦးအောက်ဖက်ခွေးအနေအထားသို့ခေါက်ရန်အမျိုးရှိပါတယ်. ဒါဟာဒါကြောင့်အံ့သြလောက်အောင်ငြိမ်းချမ်းသောင်!
ဧပြီလအတွင်းဒေသသို့သွားရောက်, ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်နွေ ဦး ဝိပဿနာလမ်းညွှန်များဝိဇ္ဇာအတတ်အားအီတလီအေိုငျမြားခရီးစဉ် ရှေ့ဆက်လူအစုအဝေး၏နေဖို့.
နွေဦးရဲ့အစအခမ်းအနားကျင်းပခြင်းနှင့်ဘာစီလိုနာမှရထားကိုဖမ်း. ဒါဟာစပိန်ကလူနှင့်အတူဤစပိန်မွို့တှငျမတ်ေတာတျော၌လဲအများကြီးယူမည်မဟုတ်, အဘယ်သူသည်အစဉ်အမြဲဖြေလျော့ခြင်းနှင့်နေ့စဉ် siesta ယူဖို့သတိရပါ – နေ့လည်စာစားပြီးလျှင်ခဏအိပ်သည်, အဖြူရောင်အပေါ်လျှော့ပေါ့နေချိန်မှာ ကမ်းခြေ, စား အရသာ paella, နှင့် လတ်ဆတ်တဲ့ sangria သောက်သုံး.
အဆိုပါ Catalonia ဧရိယာထဲမှာလဲလျောင်း, တိုက်ရိုက်စပိန်၏အရှေ့မြောက်ပိုင်းမြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်, ဘာစီလိုနာသည်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည် စပိန်, နှင့်အကျော်ကြားဆုံးတွေထဲက ခရီးစဉ် အဆိုပါနွေစဉ်အတွင်းဥရောပခရီးသွားမှခရီးသွားများအတွက်. ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဟောင်းဗိသုကာကျောက်မျက်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ် crossover နှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျ Gaudi ဗိသုကာတစ်ဦးကြီးတွေပန်ကာဖြစ်လျှင်, အဆိုပါသှေးဆောငျ Sagrada Famíliaကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုလာ, CASA Batllo, နှင့်Güellပန်းခြံ. ဘာစီလိုနာအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးအများအားဖြင့်ပူနွေးဖြစ်ပါတယ်, သငျတို့သညျဤသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ခရီးသွားဧည့်ဖော်ရွေ ယခုနှစ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမြို့.
သင် Bruges သိစေခြင်းငှါ, ဘယ်လ်ဂျီယံ, အသံထွက်နေသည် “broozh,” ဒါပေမယ့်အများကြီး, နှင့်များ၏သူရဲကောင်းများ “Bruges အတွက်” ရုပ်ရှင်, ဆက်ဆက်မ. သူတို့က Dublin hitmen ဖြစ်ကြသည်, ထိခိုက်အလွန်မှားယွင်းတဲ့သွားပြီးနောက်နှစ်ပတ်အဘို့မိမိတို့သူဌေးများကအဲဒီမှာစလှေတျတျော. တဦးတည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်ရန်မအကြောင်းပြချက်ကိုမြင်ပေမယ့် Dublin သူတစ်ဦးနုပျို hothead ဖြစ်ပါသည်; အခြား, အဟောင်းတွေ, gentler, ပိုပြီးစပ်စု, လမ်းညွှန်စာအုပ်နှင့်ကြေညာချက်များကိုဝယ်မည်: “Bruges ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားအလယ်ခေတ်မြို့ဖြစ်၏!”
ဒါကြောင့်သေချာပေါက်ပုံရသည်. ရုပ်ရှင်အခြားဘာမျှမပြည့်စုံပါလျှင်, ၎င်းသည်များစွာသောသူတို့အား Bruges သို့အလျင်အမြန်သွားလိုသောဆန္ဒကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်.
အသုံး တစ်နှစ်ပတ်လုံး ၂ ယောက်အတွက်အထူးတစ်ခုဖြစ်သည်! ပြင်သစ်နှင့်စပိန်တို့အကြားလဲလျောင်း, ကောင်းစွာလူသိများငယ်မြို့ အားကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှု နှစ်ခုမြို့ကြီးများဆောင်ကြဉ်း, အထှတျအထိနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား ဘီယာ နဲ့ချောကလက်. နှင့်အတူ ပဲရစ်, ပရာ့ဂ်, နှင့် ဘူဒါပက်, ဒီအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော တူးမြောင်းနှင့်အဟောင်းအလယ်ခေတ်အိမ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏ဥရောပ၌မြို့ကြီးများ.
ဤ 2,000 နှစ်အရွယ်မြို့အနောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည် ဂျာမနီ နှင့်ဒေသတွင်းရဲ့အဓိကယဉ်ကျေးမှုအချက်အချာဖြစ်ပါသည်. အလယ်ခေတ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် မြစ်အမြင်များ breathtaking, Cologne တစ်တပ်မက်-ခံထိုက်ဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. အထူးသဖြင့်အသစ်တခုယဉ်ကျေးမှုသို့ခုန်ချင်သောသူတို့အဘို့နှင့် အတှေ့အကွုံ ဘဝနေစဉ်အတွင်းတစ်နည်းလမ်းသစ် ဥရောပတိုက်တွင်ခရီးသွားလာ. သင်၏ကင်မရာကိုမမေ့ပါနှင့်! Cologne open-စိတ်တူကိုယ်တူမြို့ဖြစ်၏. အခြားမြို့ကြီးများနှင့်အလားသဏ္atာန်တူစွာလှပမှုမရှိပေ, သင်မူကားပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်သည့်အခါ, သင်ကဂျာမနီနှင့်ကျိန်းသေအဆိုပါနွေစဉ်အတွင်းဥရောပခရီးသွားဘို့ငါတို့စာရင်းထဲမှာအပေါ် nicest မြို့တကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-spring%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း) ဂျာမနီ